Imaaraadka Carabta Oo Raalli-gelin Ka Dalbaday Dawladda Soomaaliya – somalilandtoday.com
Imaaraadka Carabta Oo Raalli-gelin Ka Dalbaday Dawladda Soomaaliya
(SLT-Hargeysa)-Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ugu baaqday dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya in ay raalli gelin ka bixiso go’aankii dowladda Soomaaliya ay kula wareegtay lacag $9Milyan gaadheysay oo lagu qabtay garoonka Muqdisho.
Wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda dalka Imaaraadka Carabta Anwar Gargash oo ka hadlayay xarunta Cilmi baadhista ee Policy Exchange ee magaalada London ayaa sheegay in Imaaraadka aysan sameyn wax qalad ah hayeeshee lagu xadgudbay.
Waxaa uu sheegay in dowladda Imaaraadka ay raalli gelin uga fadhido dowladda Soomaaliya oo uu sheegay in ay si sharci darro ah kula wareegtay lacagta dowladda Imaaraadka ee ku socotay xarumaha Imaaraadka ee Muqdisho.
Anwar ayaa sheegay in hadda ay socdaan dedaallo dhex dhexaadineed oo lagu doonayo in xiriirka labada dal lagu soo celiyo.
Ma uusan sheegin cidda dhexdhexaadintaas wadda, waxaase uu sheegay in Imaaraadka ay sii wadeyso dadaalkeeda la xiriira in nabad lagu soo dabbaalo marin biyoodka Badda cas iyo Badweynta Hindiya.
Bishii April ee la soo dhaafay ayuu xumaaday xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka kaddib markii Dowladda Soomaaliya ay la wareegtay lacag saarneyd Diyaarad ay leedahay Imaaraadka oo soo caga dhigatay Garoonka Muqdisho.
Imaaraadka waxaa uu sheegay in lacagtaas ay ugu talagaleen Ciidamada Soomaaliya ee ay iyaga tababarayeen,waxaana kaddib xigtay in Howlihii shaqo ee Imaaraadka ka waday Soomaaliya joojiyay.